Izindaba - Ucwaningo luthi imakethe ye-optical module izodlula i-USD17.7 billion ngo-2025, ngomnikelo omkhulu kakhulu ovela ezikhungweni zedatha
“Usayizi wemakethe wamamojula we-optical ufinyelela cishe ku-USD7.7 billion ngo-2019, futhi kulindeleke ukuthi ube ngaphezu kokuphindwe kabili kuye cishe ku-USD17.7 billion ngo-2025, nge-CAGR (izinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe) lika-15% kusukela ngo-2019 kuya ku-2025. ” Umhlaziyi we-YoleD & Veloppement (Yole) uMartin Vallo uthe: “Lokhu kukhula kuhlomulile kubahlinzeki bezinsizakalo ezinkulu bamafu abaqala ukusebenzisa amanani amakhulu kakhulu abiza kakhulu (kufaka phakathi amamojula we-400G no-800G). Ngaphezu kwalokho, abasebenza ngocingo bakhuphule nokutshalwa kwezimali kumanethiwekhi e-5G.
U-Yole uveze ukuthi kusuka ku-2019 kuya ku-2025, isidingo samamojula we-optical avela emakethe yokuxhumana kwedatha sizofinyelela i-CAGR (izinga lokukhula lonyaka elihlanganisiwe) cishe elingu-20%. Emakethe yezokuxhumana, izofinyelela i-CAGR (izinga lokukhula lonyaka) elingaba ngu-5%. Ngaphezu kwalokho, ngomthelela walolu bhubhane, inani lemali engenayo kulindeleke ukuthi lenyuke ngokulinganayo ngonyaka wezi-2020. Empeleni, i-COVID-19 ikuthinte ngokwemvelo ukuthengiswa kwamamojula womhlaba womhlaba. Kodwa-ke, kuqhutshwa isu lokusetshenziswa kwe-5G nokuthuthukiswa kwesikhungo sedatha yamafu, isidingo samamojula we-optical sinamandla kakhulu.
Ngokusho kukaPars Mukish, umhlaziyi waseYole: “Eminyakeni engama-25 edlule, ukuthuthukiswa kobuchwepheshe bezokuxhumana kwe-fiber fiber kuthuthuke kakhulu. Ngawo-1990s, amandla aphezulu ezixhumanisi ze-fiber optical fiber ayengu-2.5-10Gb / s kuphela, futhi manje isivinini sabo sokudlulisa singafinyelela ku-800Gb / s. Intuthuko kule minyaka eyishumi edlule yenze ukuba izinhlelo zokuxhumana ezidijithali ezisebenza kahle kakhulu futhi zaxazulula inkinga yokuncishiswa kwesiginali. ”
U-Yole uveze ukuthi ukuvela kobuchwepheshe obuningi kuye kwenza ukuthi ijubane lokudlulisa lamanethiwekhi amabanga amade namametro metro afinyelele ku-400G noma ngaphezulu. Umkhuba wanamuhla maqondana namazinga we-400G ususelwa ekufunweni kwe-cloud opharetha wokuxhuma isikhungo sedatha. Ngaphezu kwalokho, ukukhula okukhulayo komthamo wenethiwekhi yokuxhumana kanye nenani elikhulayo lamachweba we-optical kube nomthelela omkhulu kubuchwepheshe be-module module. Idizayini entsha yefomu iya ngokuya yanda, futhi ihlose ukunciphisa usayizi wayo, ngaleyo ndlela inciphise ukusetshenziswa kwamandla. Ngaphakathi kwemodyuli, amadivayisi we-optical namasekhethi ahlanganisiwe ayasondela ngokusondela.
Ngakho-ke, ama-silicon photonics angaba ubuchwepheshe obuyinhloko bezixazululo ze-optical interconnect zesikhathi esizayo zokubhekana nokwanda kwezimoto. Lobu buchwepheshe buzodlala indima ebalulekile kuzicelo ezisukela kumamitha angama-500 kuye kumakhilomitha angama-80. Imboni isebenza ukuhlanganisa ama-InP lasers ngqo kuma-silicon chips ukuthola ukuhlanganiswa okungafani. Izinzuzo zayo ukuhlanganiswa okungenakulinganiswa nokususwa kwezindleko nokuxakaniseka kwamaphakethe we-optical.
UDkt Eric Mounier, umhlaziyi waseYole, uthe: “Ngaphezu kokukhuphula izinga ngama-amplifiers ahlanganisiwe, ukwenziwa kwedatha ephezulu kungatholwa ngokuhlanganisa ama-chip advanced kakhulu okucubungula amasiginali edijithali, ahlinzeka ngobuchwepheshe obuhlukahlukene bokushintshashintsha kwezwi, njenge-PAM4 Noma i-QAM. Enye indlela yokwandisa isilinganiso sedatha ukufanisa noma ukuphindaphinda. ”